Tsipy kanetibe – 50 taon’ny Assurance Mama: norombahin’ny Ny Havana ny amboara | NewsMada
Tsipy kanetibe – 50 taon’ny Assurance Mama: norombahin’ny Ny Havana ny amboara
Notontosaina, ny asabotsy 1 sy ny alahady 2 septambra lasa teo, teny amin’ny kianja Ambohitsaina, ny fifaninanana tsipy kanetibe, nankalazana ny faha-50 taon’ny “Assurance Mama”. Norombahin’ny ekipan’ny Ny Havana ny amboara teo amin’ny sokajy lehilahy olon-telo miaraka.
Resin’i Dominique sy i Jean-Claude ary i Sedera, teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa tery, 13 no ho 11, ny ekipan’ny Cnaps Sport, nahitana an’i Narilala sy i Jisca ary i Vatosoa. Nivoaka sempotra ny ekipan’ny Ny Havana vao nandresy satria efa nitarika tamin’ny isa mazava 11 no ho 0 ny Cnaps Sport no tratra ary tsy nihetsika teo intsony. Na izany aza, nahavita dingana tsara ny ekipan’ny Cnaps Sport, izay nandavo ny ekipan’ny Mama, notarihin’i Patou, tamin’ny isa, 13 no ho 3.
Nahafaly an-dRabekoto Raoul Arizaka, tale jeneralin’ny Cnaps, ny vokatra azon’ny ekipany, izay nisaotra ireo mpilalao ary mbola nampirisika azy ireo hanohy sy hanatsara ny vokatra efa azo. Marihina fa nitana ny laharana faharoa ihany koa ny sokajy vehivavy nahitana an’i Zodia sy Harindranto. Tsiahivina fa nahatratra 57 ny isan’ireo ekipa nandray anjara, tamin’ity fankalazana ny 50 taon’ny Assurance Mama ity.